FIFIDIANANA ETO MADAGASIKARA
vendredi, 13 avril 2018 19:58
Lany tsy nasiam-panovàna teny amin’ny Antenimierandoholona ireo volavolan-dalàna fehizoro mikasika ny fifidianana ary nijanona tamin’ny endriny nandanian’ny Antanimierampirenana azy dia ny volavolan-dalàna fehizoro laharana faha-05/2018 momba ny fepetra ankapoben’ny fifidianana sy ny fitsapakevibahoaka, volavolan-dalana fehizoro laharana faha-06/2018 mahakasika ny fifidianana Filohan’ny Repoblika ary volavolan-dalana fehizoro faha-07/2018 mahakasika ny fifidianana solombavambahoaka izay nanindrahindran’ny governementa fa fandresen’ny demokrasia.
Tsy hamerina an-tsipiriany ny volavolan-dalàna izahay fa hisontonana ny sain’ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny HCC ny amin’ny fahitanay ny tsy tokony hanekena io volavolan-dalàna io izay mifanohitra amin’ny Lalàmpanorenana sy ny lalàna velona. Ao amin’ny Lalàmpanorenana dia ny fiarovana ny zo sy ny fahafahana no faratampony vao manaraka ny fisarahan’ny fahefana:
1/-Fahefana mpanatanteraka : ( Filoha, governementa)
2/-Fahefana mpanao lalana : (ny Antenimiera roa tonta)
Ireo voatanisa ireo no tanjon’ny Lalàmpanorenana. Anisan’ny antom-pisian’ny HCC dia hiaro toy ny anakandriamaso ny Lalàmpanorenana mba tsy ho voahitsakitsaka ka hanafoana ireo lalàna izay tsy mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana. Fa ny mpitondra fanjakàna sy ny fitsaràna dia tokony hanaja sy
hanao izay hanajàna ny zo fototry ny Malagasy izay hita fa voahitsakitsaka ankehitriny ka mampametram-panontaniana ny nandanian’ny Antenimiera roa tonta ireo lalana ireo.
Tsy misy fanajana ny zo sy ny fahafan’ireo mpifidy raha toa ka ao ambadik’ireto lalàna ireto, misy kandidà tiana hailika fa tsy mpifidy iray fa an-tapitrisa angamba no hotampenan-mbava anefa ny tanjona dia fifidianana mangarahara manome vahana ny safidim-bahoaka.
- Mazava ao amin’ ny Lalàmpanorenana fa ny fandaminana sy ny fitantanana ny raharaha rehetra momba ny fifidianana dia ankinina amin’ny rafitra mahaleo tena iray eto amin’ny firenena dia natao andraikitry ny CENI izany, kanefa dia salovanin’ny governemanta ny andraikitry ny CENI (nahoana no tsy natolotra mialoha nandritra herin-taona niasàn’i CENI fa an-kamehana vao nampidirina ?) ;
- Fampielezan-kevitra fihodinana faharoa : fohy loatra ny fe-potoana (7 andro) amin’ny fanontàna sy fandefasana ary fanampariahana ny fitaovam-pifidianana any amin’ny biraom-pifidianana ;
- Araka ny andininy faha-125 ny lalàna 05/2018 dia noferana ho 700 ny isan’ny mpifidy isaky ny birao fifidianana ao amin’ny fokontany. Ny olana dia ny fitadiavana ireo mpikambana
handrafitra ny biraom-pifidianana ;
- Ny antotan-taratasy rehetra ilaina amin’ny fifidianana dia tokony hitovy ho an’ny mpilatsaka hofidiana rehetra (filohan-pirenena, solombavambahoaka…) ;
- Ny fahazoan’ny mpilatsa ho fidiana (indépendant) dia mifanohitra amin’ny andininy faha-72-n’ny Lalàmpanorenana izay mamaritra ny “mandat imperatif” ;
- Ao amin’ny Lalàmpanorenana andininy faha-10 sy faha-37 dia mamaritra ny fahafahana malalaka maneho hevitra sy ny zon’ny olona mandray ny fanehoan-kevitra malalaka, ny hita ao anaty lalàm-pifidianana, dia manana anjara lehibe ny “Autorite Nationale de Regulation de la Communication” (ANRC) hatramin’ny fanarahamason’ny teny ataon’ny kandida, fanasaziana ny haino aman-jery, fandrindrana ny ora handraisan’ny kandida izay tokony anjara andraikitry ny CENI fa fifidianana no resahina. Miisa 11 ny mpikambana mandrafitra
azy ary maro an’isa ny olom-panjakana. (03 ny avy amin’ny haino amanjery tsy miankina) ;
- Andininy faha-156 voalaza tsy maintsy soratra X na petatondro no atao manandrify ny safidy ao amin’ny Bileta tokana fa raha tsy izany dia lasa VATO MATY. Midika izany fa famerezan-jo ANKOLAKA ny Malagasy, izay maro no tsy mahita ity lalàna ity, ary na mahita aza tsy hahay mamaky izany, izay mifanipaka amin’ny zo fototra voarakitra ao anaty Lalàmpanorenana.
- Andininy faha-149, dimy andro ny fe-potoana farany tsy maintsy hahatongavan’ny vokatra eo anivon’ny SRMV, raha tsy izany dia tsy ho raisina intsony ny vokatra. Fanasaziana tsotra izao ny mpifidy izany ary fanosihosena ny zo fototra.
Manao antso avo amin’ny mpikambana ao anivon’ny Fitsarana Avo Momba ny Lalàmpanorenana izahay : fantatra fa nanao fianianana fa hitandro ny Lalàmpanorenana toy ny anakandriamaso sy ny lalàna manankery ary ny fotokevi-dehibe izay raiketiny ianareo. Ireo no hany hibaiko, amin’ny saina
tony, ny didy havoaka manaja ny fahamarinana.
Antananarivo, faha-13 avrily 2018
Hoy (milahatra araka ny alfabeta) :
- Andoniaina ANDRIAMALAZARAY,
- Andry RANIVOARISON,
- Arlette RAMAROSON,
- Charles RAKOTONIRINA,
- Dr. Bruno RAKOTOARISON,
- Emérentienne RATSIMBAZAFY,
- Gal. Désiré RAMAKAVELO,
- Hery RANAIVOSOA,
- Holijaona RABOANARIJAONA,
- Madeleine RAMAHOLIMIHASO,
- Saraha RABEHARISOA